Shiinaha GD-EMB-010 bik Baaskiilada korantada ee korontada, 48v, 26 inji, batari awood badan oo wata baaskiillada buurta korontada ku shaqeeya, warshad batari lithium iyo soosaarayaasha | GUODA
GD-EMB-010 bik Baaskiilada korantada ee korontada, 48v, 26 inji, batari awood weyn leh baaskiilada buurta korontada ku shaqeeya, batari lithium
30-50km / saacaddii
hakinta baaskiilka korontada
32Km / saac
LTWOO A5 9 xawaare
Frame: 26 ″ x4.0, alloy, TIG welded, oo leh sanduuqa BB oo ay ku jiraan kontoroolka iyo fiilooyinka.
Fargeeto: 26 ″ x4.0, taaj daawaha ganaax iyo alaab bixida, oo leh haydhka qufulka oo lagu xakameeyo kontoroolka fog ee barta gacanta.
Noocyada Madaxa: Bir / Dalool, xargo la'aan, 28.6 × 44-55x30MM, NECO
Handlebar: alloy handlebar, 31.8mmTP22.2x680mm, daawaha dunta xargaha, ciid madow
Qalabka Biriiga: F / R: bareegyada qalabka korontada ku shaqeeya, HD-E500, oo leh bareeg koronto ku shaqeeya.
Qalabka Crank: Qalabka alloy, giraan silsilad ah, oo leh daboolka silsiladda madow. 3/32 ″ x38Tx170mm
Qalabka BB: Waa la shaabadeeyey
F / R Hub: F: xarun alloy ah oo loogu talagalay bareegga disc leh QR, KT; R: matoor hub
Qalabka Gear: LTWOO A5 9 xawaare, SL-V5009 / RD-V5009 / CS-A09-46 (11-46T)
Cirifka: 26 ″ x13GG36H, darbi laba jibbaaran, madow buuxa
Af-hayeennada: 304 #, 13G. bir bir ah, afhayeenno madow, oo ibta naxaas leh
Taayirada: 26 ″ x4.0 ″, madow, A / V
Kursiga: daboolka sare ee vinyl, oo lagu duubay PU, madow
Baarayaasha: Daawaha, 9/16 ″ oo leh kubbado iyo iftiimiyayaal, madow
Decal: Warqad biyo ah, oo leh calaamadda birta hore
Gargaarka: oo leh iftiimiyaha F / R iyo muraayad giraangiraha, oo leh walxaha loo yaqaan 'kickstand', oo dawan leh
Mashiinka iyo Batariga: 48V / 500W gadaashiisa gawaarida BAFANG; 48V / 10.4AH, batari tayo sare leh Lithium, xeedho leh fiilo
Nidaamka: PAS / Garonka, dareeraha xawaaraha, guddiga LCD oo leh 6 gargaar heerar, soo bandhig awood, 6KM / H gargaar bilow ah
Xawaaraha ugu badan: 32km ama si aad u dalbato
Fogaanta Kharashka: 50km (isku celcelis)
GuoDa Koronto Baaskiil Koronto # GD-EMB-010
Hore: GD-EMB-009 B Baaskiilada korantada ee korantada, 36v, 29 inji, bareegyada mechine disc, watt: 200 - 250w
Xiga: GD-EMB-011 B Baaskiilada korantada ee korantada, 36v, 28 inji, batari lithium, 6061 aluminium iskujir ah, matoor 250w
GUODA EBIKE: Qaabka mootada ayaa laga sameeyay Aluminium aluminium ah, oo baaskiil ka dhigaya mid fudud oo culeyskiisu yahay oo dabacsan dadka inay raacaan. Faa'iidada badeecada: U adkaysiga daxalka iyo qayilo, shaqo wanaag iyo daahan fudud. Waxay leedahay iska caabin ah Abrasion wanaagsan iyo alxanka wanaagsan, oo waxaan ku siin karnaa adeegyo habaysan.